Fikarohana momba ny firaisana Felix Lee Lerma: Medaly iray izay manohizana ny maty - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Felix Lee Lerma: Medaly iray izay manohintohina ny maty
Fandraisana anjara sy fifandraisana amin'ny maty
Gary E. Schwartz, PhD, profesora ao amin'ny Oniversiten'i Arizona, dia nanao fanandramana izay maneho amin'ny endriny fa ny media dia afaka mifandray amin'ny olona efa nodimandry. Mba hamerenana ity fandinihana ity, mandehana
HBO Afterlife manazava amin'ny haino aman-jery Mitady ireo zavatra efa nodimandry
Fiaraha-miasa amin'i Felix Lee Lerma
Dr. Schwartz dia niasa tamin'ny fampahalalam-baovao malaza toy ny John Edward. Na dia mbola tsy niatrika fivoriana niaraka tamin'i John Edward aza aho, dia nanana fotoam-pivoriana niaraka tamin'ny media medium aho, Felix Lee Lerma, izay nahatonga ahy ho mpino amin'ny fahaizany mifandray amin'ny maty. Felix dia navadika ho ankavanana.
Namana akaiky ahy aho, andeha hiantso an'i Anna, teraka tao Kroasia ary nifindra tany San Francisco tamin'ny naha-zatovo azy, niaraka tamin'ny vondrom-piarahamonina Kroatiana hafa. Tamin'ny 2008, olona maromaro tao amin'ny fiarahamoniny no nodimandry. Betsaka ny naman'i Anna no niara-niasa tamin'i Felix ary nilaza izy ireo fa tena nisy dikany ny fampahalalana.
Efa namoy ny reniny taona maro talohan'io i Anna ary tena faly izy fa afaka miresaka amin'ny reniny malalany. Tsy vitan'i Anna ny nifanaovany tamin'i Felix ho azy, fa nanao fotoana koa izy. Samy voatendry ho amin'ny asabotsy manokana ny fanendrena roa, miaraka amin'i Anna hifanena amin'i Felix ao amin'ny PM 1 ary ny zanaky ny zanakavaviny dia hijery azy ao amin'ny PM XUMUMX.
Ny marainan'ny fanendrena dia niantso ny zanak'anabavin'i Anna hanoro hevitra fa tsy ho afaka hanao ny fotoam-pivoriana miaraka amin'i Feliksa izy. Avy eo i Anna dia nanolo-kevitra ny handray ilay fotoana voatondro ho solony, satria efa naloa izany. Tsy nampahafantarin'i Anna an'i Felix ny fanovana ny drafitra, na ny zananivavy.
Fianakaviana roa no mampiseho fiaraha-midinika miaraka amin'i Felix
Rehefa tonga tany amin'i Felix i Anna, dia nanamarika fa fianakaviana roa samihafa avy amin'ny tontolon'ny fanahy izay tena nanahy mafy ny hiresaka taminy. Nilaza izy fa ny fianakaviana iray dia Kroaty, izay azo takarina. Ny tsy nampoizina dia nilaza i Felix fa ny ankamaroan'ny fianakaviana dia Ukrainian.
Teraka tany Okraina ny ray aman-dreniko ary toa ny mpianakaviko efa nody mandry no niseho mialoha nandritra ny fotoam-pivavahan'i Anna, toa niandry ny fotoana mety hitranga amin'ity tolakandro ity aho. Tsy manana havana na namana Okrainiana i Anna afa-tsy izaho.
Mahagaga, araka ny nomarihina, tsy nahalala i Felix fa tsy maintsy hiatrika fivoriana amin'ny 4 hariva aho fa tsy ny zanak'anabavin'i Anna Kroaty. Ankoatr'izay, ankoatr'i Felix tsy mahalala momba ny fanendrena ahy dia tsy nahalala na inona na inona momba ahy i Felix. Ny tenako dia mbola tsy nandre momba an'i Felix talohan'io daty io.
Ny fanontaniana dia hoe, ahoana no nahafantaran'i Felix fampahalalana manokana momba ny fianakaviana Okrainiana rehefa niseho i Anna?
Tao amin'ny fotoam-pivavahan'i Anna dia nanondro marina ireo havana Kroaty efa maty i Felix ary nanome antsipiriany momba ny fiainan'izy ireo marina izy. Ireo olona ireo dia nanana anarana voalohany tsy mahazatra, toa an'i Radko, izay ho sarotra ho an'ny tsy Kroaty ho fantatra.
Raha ny fitantaranay, i Anna sy izaho dia resy lahatra fa i Felix dia afaka nifandray tamin'ny havantsika efa maty ary nampita hafatra marina avy amin'izy ireo tamintsika. Felix dia nampita fampahalalana izay tsy azony nianatra tamin'ny fomba mahazatra.
Fifampiresahana momba an'i Felix Lee Lerma
Afaka mizara ireo vaovao nomena an'i Anna sy izaho aho tamin'ny alalan'i Felix dia nanan-kery sy nanampy. Na dia tsy azoko antoka aza fa hanana ny traikefa hafa ihany koa ny hafa, Felix dia fifankahitana ho an'ireo te hanandrana hifandray amin'ireo olon-tiany very. Ho an'ireo liana, tsidiho azafady ny tranonkalany: www.felixleelerma.com